Banyere Anyị - Yiwu Sandro Trade Co., Ltd.
Disposable Anọrọ Gown
Mmadụ Bịa na ileta Yiwu Sandro Trade Co., Ltd.
Anyị bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa magburu onwe ya
Yiwu Sandro Trade Co., Ltd .. Emi odude ke Yiwu, Zhejiang, China, pụrụ iche na-enye dị iche iche mgbochi nje ngwongwo:
1 / ikpochapu ihe nkpuchi na nkpuchi ogwu 2 / KN95 klas na-ekpuchi oghere (na FFP1 / FFP2 / FFP3 iche)
3 / Igwe Nchafụ, ,mụaka Masks 4 / 3M KN90 / KN95 nkpuchi
Ọkwa 1 / larịị 2 / larịị 3 / ọkwa 4, ndị nkịtị na ndị ọrụ ahụike.
1 / Ear temometa 2 / ọkpọkọ temometa 3 / okpu na okpu nwere ọta
1 / nkpuchi nkpuchi 2 / bandanas.
Companylọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị ụlọ ọrụ mmepụta ihe na 100 na-edebanye aha n'okpuru iwu nke ndị Republic of China, nwetara asambodo ndebanye aha nke ngwaọrụ ahụike na ikikere nrụpụta, nke enyere aka na ISO9001: 2008 International Quality Management System. Ha niile agwụchara ngwongwo ngwongwo:
1 / Europe EN149: 2001 + A1: 2009 na FFP1 NR / FFP2 NR / FFP3 NR akara ule 2 / American NlOSH N95, FDA,
Akụkọ nyocha 5 / CE & FDA AD GB maka mbupụ n'ụwa niile.
Ike klas nke R&D nke izizi
Ngwa nchekwa na zuru oke nke akụrụngwa
Amamiihe ahịa otu na ọkachamara ihe ọmụma na ezi obi àgwà
Ọmarịcha nkwado - ọrụ nkwado dabere na ụkpụrụ mbụ nke Ndị Ahịa
Jighi quality njikwa usoro na nnukwu nnyocha ụkpụrụ
Nchekwa ma zuru ezu ọkọnọ nke ndu ihe
Ebe ọ bụ na nsogbu ụwa na-aka ngwa ngwa, anyị na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịnagide nsogbu ahụ. ma na-agbasawanye ikike anyị. Ugbu a, anyị nwere ike iru 1 nde + Maka mkpofu mkpofu na 100 puku + maka KN95 masks kwa ụbọchị.
Ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ihe nkpuchi na-ebupụ kwa ụbọchị, anyị na-emeziwanye ọrụ logistic, ugbu a anyị na ọtụtụ ụlọ ọrụ lọjistik kwadoro. Enwere ugbo elu oge niile 2-3 kwa izu wee fega ọdụ ụgbọelu na mba dị iche iche, iji hụ na ngwaahịa rutere gị n'enweghị nsogbu na ngwa ngwa.
Ndị otu ọkachamara na ndị nrụpụta, ogo dị elu na mbupụ ọkachamara, ha niile na-ahụ anyị ka anyị nye gị ọrụ kacha mma.
1 / Igwe kachasị arụ ọrụ na nkenke.
Ahụmahụ 2 / ọgaranya na akwụkwọ edere maka mbupu
3 / Ihe omumu zuru oke maka ibupu onodu ogwu oria
Akwadoro Na Mba Nile
Izute ihe ndị gọọmentị chọrọ. Ngwongwo nje nje niile nwere nkwenye site na mba ụwa, gụnyere US, Europe, China, Australia, New Zealand, wdg.
1 / Elu mma
2 / Asọmpi ahịa
3 / Mbupu ngwa ngwa
4 / Na-eju afọ Mgbe-sales ọrụ
Ọrụ nkwụsị na ndị otu ọkachamara
1 / Ndị ọrụ aka ọrụ. Na usoro nke usoro nhazi usoro, nyocha ngwaahịa na nnwale, lọjistik, na ọrụ ndị ahịa, anyị bụ ndị ọkachamara yana ndị na-ekwenye ekwenye
Ọrụ 2/24/7, anyị na-etinye ihe ndị ahịa chọrọ na mkpa ya na ọnọdụ mbụ
Ọrụ ndị ahịa na-enweghị atụ
1 / Inye oru na nkwado kachasi elu nye ndi ahia anyi ahia n’ụwa nile.
2 / Inye azịza ọsọ ọsọ na nke ọkachamara maka ajụjụ gị ma ọ bụ nkọwa gị.
3 / Na-aza n'ime oge ngwangwa ngwa ngwa. A ga-aza ajụjụ nyocha niile n'etiti awa 24.
Iji kpọtụrụ anyị, biko kpọtụrụ anyị na: manager@sandrotrade.com
Yiwu sandro trade Co., Ltd. Ahịa
Nkpuchi ihu ihu, Kn95 Nkpuchi ihu, Akwa nkpuchi, Nkpuchi, Igwe nkpuchi, Nkpuchi Ahụ,